Nkọwa:Ngwá Mgbidi Na-arụ na Mmetụta Motion,Led Wall Pack 3000K,Ngwongwo ngwongwo Led Wall Pack
Home > Ngwaahịa > Mgbidi Mgbidi > Enwụrụ Led Wall Light Fixtures > 30W Led Wall Pack Retrofit Kit 3000K
Ndị a na-eme mkpọsa nke a na-eme mkpọsa dị mma maka ọkụ dị n'èzí n'ihi na bulbs bụ akara mmiri IP65. Anyị Led Wall Pack 3000K bụ EC na ROHS edepụtara maka nchekwa gị ma kwadoro maka ọnọdụ mmiri. Jiri Led Wall Pack Retrofit Kit maka ugbo, ebe obibi, ụlọ ahịa na-ere ahịa, ihe ndị e ji eme njem, ebe a na-ebugharị ụzọ, ụzọ, ụzọbata, na ebe ndị na-adọba ụgbọala.
Na eduziri mgbidi mgbidi Ezubere iji wụnye dịka luminaire n'elu. Ebe obibi azụ na-adị mfe n'elu igbe niile.
Ọ bụghị naanị na ìhè ga-ewepụ ọkụ ọkụ zuru oke ma ọ ga-arụ ọrụ nke ọma ma nwee ogologo oge ndụ. Ihe mmiri ndị a Mgbidi mgbidi a na-ebute n'èzí na- enwe ihe dị ka awa 50,000 na-adabere na iji ya eme ihe, ya mere, mgbidi mgbidi anyị na- ebute na mberede ekwesighi ka dochie anya ya dika oku ma obu ihe ozo, nke bu nke di n'etiti 1,000 na 2,000 awa n'ogo. 100-277V arụmọrụ voltage arụmọrụ, okpomọkụ ọrụ nke -4 ° F ruo 113 ° F.
Ngwá Mgbidi Na-arụ na Mmetụta Motion Led Wall Pack 3000K Ngwongwo ngwongwo Led Wall Pack Ngwá Mgbidi Na-enweghị Ngwá Agha Na Mberede Mgbapụta Ngwá Mmiri na-asọpụta n'èzí 100w Mmetụta sensọ Motion 100w Ebube Ntanaka Motion Ngwá ụfụ na-ehichapụ